Rose ဝိုင်ကိုမြည်းစမ်းကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ ... | Duwun
နူးညံ့ငြင်သာတယ်ဆိုလို့ ဝိုင်ဖြူ၊ ဝိုင်နီတို့လို ထိရောက်မရှိဘူးလို့တော့ အထင်မမှားလိုက်ပါနဲ့။
Rose ဆိုတာ နူးညံ့ငြင်သာပါတယ်။ လတ်ဆတ်ပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းလည်းမြင့်မားလှပါတယ်။ နူးညံ့ငြင်သာတယ်ဆိုလို့ ဝိုင်ဖြူ၊ ဝိုင်နီတို့လို ထိရောက်မရှိဘူးလို့တော့ အထင်မမှားလိုက်ပါနဲ့။
Rose ဝိုင်တွေခေတ်စားလာတမကြာသေးဘူးဆိုပေမယ့် မနေ့တနေ့ကမှပေါ်လာတဲ့ဝိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းကလူတွေက Rose ဝိုင်ကအရမ်းချိုလွန်းတယ်လို့ယူဆပြီး သောက်သုံးမှုနည်းခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီ နေ့အချိန်မှာတော့ Rose ဝိုင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်မှုဟာ အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့တိုးတက်လာနေတာကိုတွေ့နေရပါပြီ။
Rose ဝိုင်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးသလဲ ?
Rose ဆိုတာ ဝိုင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းကနေ ဖောက်လုပ်ရတဲ့ဝိုင်မျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ တစ်ချို့အသီးတွေကနေဖောက်လုပ်တာပိုကောင်းနိုင်ပေမယ့် Rose ဝိုင်ကိုအနီရောင်စပျစ်သီးနွယ်ဝင် ဘယ်လိုအသီးမျိုးကနေမဆို ဖောက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဝိုင်နီလိုပဲ Rose ဝိုင်ဟာလည်း သူ့ရဲ့အရောင်အဆင်းဖြစ်တဲ့ အနီရောင်ကို အနီရောင်စပျစ်သီးကနေရရှိပါတယ်။ ဝိုင်နီအဖြစ်ဖောက်လုပ်ရာမှာ အနီရောင်စပျစ်သီးကနေ အနီရောင်ကိုရရှိဖို့ ရက်သတ္တပတ်အတန်ကြာအချိန်ယူရပေမယ့် Rose ဝိုင်ဖောက်လုပ်ရာမှာတော့ ဖောက်လုပ်တဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး နာရီအနည်းကနေ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့အရောင်ကိုရရှိပါတယ်။ စပျစ်သီးကိုအခွံနဲ့အချိန်ကြာကြာစိမ်ထားလေလေ အရောင်ကပျော်ဝင်လေဖြစ်ပြီး စိမ်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ကာ ဝိုင်က လှပတဲ့ပန်းရောင်ကနေ ကြက်သွေးရောင်အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Rose ဝိုင်ကိုကြာကြာသိမ်းဆည်းထားသင့်သလား ?
Rose ဝိုင်တွေဟာ နုပျိုလတ်ဆတ်မှုကြောင့်နာမည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ချက်ချင်းသောက်ဖို့ရည်ရွယ် ဖန်တီးထားတဲ့ဝိုင်မျိုးပါ။ စပျစ်ကနေအချိန်ကြာကြာယူပြီးဖောက်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် စည်နဲ့သိုလှောင် ဖောက်လုပ်လေ့လည်းမရှိတာကြောင့် ပုလင်းထဲမှာအချိန်ကြာကြာထားပြီးသောက်ဖို့မသင့်လျော်ပါဘူး။ လတ်ဆတ်လေကောင်းလေပါပဲ။
Rose ဝိုင်တွေအကုန်လုံး ချိုလား ?
Rose ဆိုတာဝိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ချိုတဲ့ Rose ဝိုင်တွေရှိသလို Dry ဖြစ်တဲ့ ဝိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့အညီရွေးချယ်စရာ Rose ဝိုင်မျိုးကွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်း ငယ်တုန်းက Rose ဝိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့အယူအဆတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဝိုင်က ပန်းရောင်သမ်းလေ ပိုချိုလေဆိုတဲ့အယူအဆပါပဲ။ အဲဒီအယူအဆက ၁၉၉၉ နဲ့ ၂၀၀၀ လွန်နှစ်တွေတုန်းကမှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ မမှန်တော့ပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Rose ဝိုင်တွေရဲ့အရောင်က ဝိုင်ပြုလုပ်သူရဲ့အကြိုက်ဖန်တီးမှုသာ ဖြစ်ပြီး သကြားပါဝင်မှုနဲ့ထပ်တူမကျတော့ပါဘူး။ တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့ Rose ဝိုင်ကိုသောက်မယ့်အချိန်မှာ အချိုလား Dry လားသိချင်တယ်ဆိုရင်အရောင်ကိုကြည့်တာထက် စားပွဲထိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ဝိုင်ရောင်းချသူကိုမေးမြန်းတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Rose ဝိုင်ရဲ့အရသာဟာ ဝိုင်နီ နဲ့ ဝိုင်ဖြူ အရသာပြင်းပြင်းတွေရဲ့ ကြားအလယ်အလတ်လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Rose ကိုသောက်မယ်ဆိုရင် ယေဘူယျအားဖြင့် ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးနဲ့မဆိုတွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Rose ဝိုင်တွေဟာ ဘယ်လိုပွဲအခမ်းအနားမျိုး၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့မဆိုလည်း လိုက်ဖက်ပါတယ်။